GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
N’afọ ndị gara aga, ọ na-abụkarị ndị nne na nna na-ebu ụzọ agwa ụmụ ha gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Ha na-eji nwayọọ nwayọọ na-akụziri ha ya ka ha na-eto.
Ma n’oge anyị a, ọ dịghịzi otú ahụ. Otu akwụkwọ aha ya bụ The Lolita Effect kwuru, sị: “Ọtụtụ ụmụaka taa na-ebido mgbe ha ka dị ezigbo ntakịrị matawa ihe ndị gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. Ụdị ihe ndị ahụ na-ejupụtazi n’ihe ndị a na-emepụta maka ụmụaka.” Ihe ndị a hà ga-enyere ụmụaka aka ka hà ga-emebi ha?
Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọ ahụ́ juru ebe niile. Deborah Roffman dere n’akwụkwọ ya a na-akpọ Talk to Me First na ‘ihe ndị na-akpali agụụ mmekọ ahụ́ na-ejupụtazi ná mkparịta ụka, vidio na egwú ndị e ji akpọsa ngwá ahịa, fim, akwụkwọ, egwú, tiivi, ekwentị nakwa kọmputa. Ihe ndị a na-emezi ka ọtụtụ [ụmụaka] na-eche na mmekọ nwoke na nwaanyị bụ ihe kacha mkpa ná ndụ.’
Ndị na-akpọsa ngwá ahịa sokwa na-akpata nsogbu a. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa na-eme ka ọhaneze kweta na efe ụmụaka ndị na-egosi ahụ́ ha magburu onwe ya. Ndị na-ere ahịa na-eresịkwa ọhaneze ụdị efe ndị ahụ. Ha si otú ahụ na-akụziri ụmụaka na ụdị efe ndị ahụ bụ ebe a nọ. Otu akwụkwọ a na-akpọ So Sexy So Soon kwuru, sị: “Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ma na ihe na-ewu ewu na-amasị ụmụaka. Ha na-ejikwa ihe ndị ahụ arata ha. Ma, o doro anya na ihe bụ́ mkpa ndị na-ere ahịa abụghị ime ka ụmụaka ndị a mebie,” kama ọ bụ “ka ha repụ ahịa ha.”
Ịkọrọ ụmụ gị gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị abụghị ebe okwu biri. O nwere ihe dị iche n’ịma otú ụgbọala si arụ ọrụ na ịbụ ọkwọ ụgbọala aka siri ike. N’otu aka ahụ, o nwere ihe dị iche n’ịma gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị na iji ihe ahụ ị ma eme ezigbo mkpebi.
Ihe ị ga-eburu n’obi bụ: Ọ bụ n’oge anyị a ka ọ kacha mkpa inyere ụmụ gị aka ka ha zụọ “ikike nghọta” ha ka ha nwee ike “ịmata ihe dị iche n’ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi.”—Ndị Hibru 5:14.
Bido rụwa ọrụ dịịrị gị. Ọ bụ eziokwu na o nwetụrụ otú ọ dị ịgwawa nwa gị gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị, ma ọ bụ ọrụ dịịrị gị. Gbalịa rụọ ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 22:6.
Akọrọla ya ihe niile otu mgbe. Kama, iwepụta otu oge ị ga-eji kọọrọ nwa gị ihe niile, i nwere ike iji oge ụfọdụ gị na ya nọ kọọrọ ya ihe ụfọdụ, o nwere ike ịbụ mgbe unu na-aga ihe ma ọ bụ mgbe unu na-arụ ọrụ ndị dị n’ụlọ. I nwere ike ịjụ ya ajụjụ ndị ga-eme ka o kwuo ihe dị ya n’obi. Dị ka ihe atụ, kama ịjụ ya, sị: “Ihe ndị a ndị na-akpọsa ngwá ahịa na-egosi hà na-amasị gị?” i nwere ike ịjụ ya, sị: “Olee ihe i chere mere ndị na-akpọsa ngwá ahịa ji egosi ụdị ihe ndị a?” Ọ zachaa, i nweziri ike ịjụ ya, sị: “Gịnịkwanụ ka gịnwa chere?”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Diuterọnọmi 6:6, 7.
Kụziere ya ihe ya na ya hà. I nwere ike ịkụziri nwa gị na-ebidobeghị akwụkwọ ihe a na-akpọ ahú nwoke ya ma ọ bụ ahụ́ nwaanyị ya, nakwa ihe ọ ga-eme ma mmadụ chọọ imetọ ya. Ka ọ na-eto, i nweziri ike ịgwa ya ihe ndị ọzọ o kwesịrị ịma gbasara ahụ́ ya. O kwesịrị ịbụ na ọ matala ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị tupu ya aghọọ okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa, matakwa otú Chineke si ele ya anya.
Kụziere ya àgwà ọma. I kwesịrị ibido mgbe ọ ka dị obere kụziwere ya ịna-ekwu eziokwu, ịna-akpa àgwà ọma nakwa ịna-akwanyere ndị mmadụ ùgwù. Ọ ga-emezi ka ịkụziri ya gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị dị mfe. Meekwa ka ihe ị na-akụziri ya doo ya anya. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị ma na inwe mmekọahụ tupu alụọ dị na nwunye adịghị mma, gwa ya ya hoo haa. Gwakwa ya ihe mere na ọ dịghị mma, nakwa nsogbu ọ ga-akpata. Otu akwụkwọ aha ya bụ Beyond the Big Talk kwuru, sị: “Ọ ga-esi ike ka ndị na-eto eto ma na ndị mụrụ ha kpọrọ ịkwa iko asị kwaa iko.”
Na-eme ihe ị na-ekwu. Na-eme ihe ị na-akụziri nwa gị. Dị ka ihe atụ, ọ̀ na-atọ gị ụtọ ma e jiri ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị na-eme ihe ọchị? Ị̀ na-eji ejiji na-adịghị mma? Ị̀ na-achụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị? Nwa gị hụ ka ị na-eme ihe ndị a, o nwere ike ime ka ọ ghara ịmụta ihe ndị ahụ ị na-akụziri ya.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Rom 2:21.
Emela ka o yie ihe ọjọọ. Mmekọ nwoke na nwaanyị bụ onyinye si n’aka Chineke. Ọ bụkwa ihe na-enye obi ụtọ ma ndị kwesịrị ime ya mee ya, ya bụ, ndị lụrụ di na nwunye. (Ilu 5:18, 19) Mee ka nwa gị mata na o nwere ike ime ya mgbe oge ruru, ya bụ, mgbe ọ na-agaghị na-amapụ ya obi ma ọ bụkwanụ na-echegbu onwe ya maka ibute ọrịa.—1 Timoti 1:18, 19.
“Kụnye [iwu Chineke] n’ime ụmụ gị.”—Diuterọnọmi 6:6, 7.
“Otú ọ dị, gị onye na-akụziri onye ọzọ ihe, ị́ dịghị akụziri onwe gị?”—Ndị Rom 2:21.
ỌRỤ DỊỊRỊ NNE MA Ọ BỤ NNA
N’agbanyeghị ihe ọtụtụ ndị na-ekwu, nke bụ́ eziokwu bụ na ụmụaka na-akacha amụta ihe n’aka nne na nna ha karịa n’aka ndị ọzọ. Akwụkwọ aha ya bụ Talk to Me First kwuru, sị: “Ụmụaka na-ebu ụzọ esi n’aka ndị mụrụ ha na ndị ọzọ toro eto nọ ha nso amata ihe ha ga na-eme. Ha na-esikwa n’aka ha aghọta ihe ndị ha na-amaghị. Mgbe ha na-achọwa ebe ọzọ ha ga-esi mata ihe ha na-amaghị bụ ma ha chọpụta na ndị mụrụ ha achọghị ịgwa ha. . . . Nchọpụta e ji ọtụtụ afọ mee gosiri na ụmụaka ndị nne na nna ha kọọrọ gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị na-aka akpa àgwà ọma. Ha na-aka enwe ike ikpebiri onwe ha ihe. Ma, nke kachanụ bụ na ha na-ezere àgwà ọjọọ ndị nwere ike ime ka ha daba ná nsogbu.”